Rockers amabinzana ▷ ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ezona binzana zintle zamaculo eerocker ezinkulu kunye namaqela afana ne-U2, REM, uKiss, iBlack Sabath, iRolling Stones, iLed Zeppelin okanye iPink Floyd.
1 Amabinzana erhabaxa
2 Iirockers kunye nebhloko yentsimbi
3 Amabinzana olonwabo lwerwala
4 Rocker Amabinzana eeVidiyo
Kukho inenekazi eliqinisekileyo ukuba konke okukhazimlayo yigolide kwaye kuthengwa isiteji esiya ezulwini. - Iled zeppelin
Wamkelekile ehlathini, siyonwaba kwaye siyadlala. Sinayo yonke into oyifunayo, sithandwa, siyawazi amagama, singabantu abanokufumana nantoni na oyifunayo. Ukuba unayo imali, sithandwa, sinesifo sakho. - Izibhamu neerowuzzi
Kukho indoda yeenkwenkwezi elinde esibhakabhakeni, ingathanda ukuza kudibana nathi kodwa icinga ukuba iingqondo zethu ziya kuqhuma. -UDavid Bowie
Ndifuna ukugungqisa ubusuku bonke kunye nepati imini yonke. -KISS
Ngaba uziva njani Kuvakala njani ukungabinamakhaya? Ukuba wedwa kwaye ungenakhaya. Umntu ongamaziyo ngokupheleleyo, njengelitye eliqengqelekayo. -Ubob Dylan
Uyazi ukuba ndizalelwe ukuphulukana kwaye umdlalo ngowedummies, kodwa yindlela endithanda ukuhlala ngayo, sana. Andiyi kuphila ngonaphakade! -I-Motörhead
Bubomi bam, ngoku okanye ngekhe, kuba andizukuphila ngonaphakade, ndifuna nje ukuphila okoko ndiphilayo. -Bon Jovi
Iirockers kunye nebhloko yentsimbi
Yiza sana ulayite umlilo wam - Iingcango
Imizila yokulwa iyatsalwa, akukho mntu ulungileyo ukuba wonke umntu uphosakele. -IBuffalo Springfield
Ndifuna nje umntu athi, "Ndiza kuhlala ndilapha xa uvuka." Uyazi ukuba ndiyathanda ukugcina izidlele zam zomile ukuze unamathele kum kwaye kuyakwenziwa oko. - I-melon eyimfama
Awunakho ukubasa umlilo ngaphandle kwentlantsi, ndikulungele ukutshisa nokuba sidanisa ebumnyameni. -Ubruce Springsteen
Uyoyika, ubomi bakho busemngciphekweni, kodwa kufuneka umntu akhuphe. -Uthintelo
Ubulolo buyaphela, iingcinga ngawe ziyinkumbulo nje ... Masingalili ngoku ngoku siphulukana nako, ixesha alinakulibala ukuba uthetha ukuthini kum -Winger
Ndililiso lezulu, xa ndikujongile ndingayifunda ingqondo yakho, ndim owenza imithetho yokujongana neziyatha, ndingakuqhatha. -Iprojekthi yeAlan Parsons
Ndazalwa ndikhululekile! Ndikhululekile njengomlambo ovuthuzayo, womelele njengomoya obetha ubuso bam uleqa amaphupha kunye nokubaleka ngokuchasene nexesha lotata. -I-Kid Rock
Unesipho esingabonakaliyo. Ufikelela kwaye uyibambe nkqi intliziyo yakho. - iGenesis
Amabinzana olonwabo lwerwala
Ndiyinkwenkwe elungileyo, ndifuna into yokudlala entsha, ndiza kukuxelela, ntombazana: danisa kum. - UMötley Crüe
Umphefumlo oxinzelelo ufunda ukubhabha. Imeko yakhe yeyasemhlabeni, kodwa uzimisele ukuzama. - Ifloyidi epinki
Sifana kakhulu kwaye ngaxeshanye sohluke kakhulu, mna ndiye ezantsi esihogweni kwaye uwela uye eparadesi. -Loquillo
Ndiyisiphekepheke kwindlela eya eMars nakwikhosi engqubanayo. Ndiyi satellite, andilawuleki Ndingumatshini wesini olungele ukuphinda ndivuselele njengebhombu yeatom malunga nokuqhuma. - uKumkanikazi
Molo, bumnyama, mhlobo wam wakudala, ndize kuthetha nawe kwakhona. - USimon noGalfunkel
Wayefuna inkululeko ebotshiwe kwaye ethintelwe, ndizamile ukumnika kodwa ndiyilikhoboka. - Muse
Iqela alize liphele. Awunakucinga ngokufa xa ibhotile ingumhlobo wakho osenyongweni. - Umqibilikaobo wot
Yipie yam yetsheri, ndisele amanzi amnandi, yeyiphi into emangalisayo. Inencasa kamnandi ide ilile nendoda. Ipipi emnandi! -Khangela ukuze
Siza kukhwela encotsheni yeli langa likaJanuwari, kwaye senze indlwane kumasebe awo, kwaye apho siza kuhleka njengokuba isandla somzuzu ngamnye sityiwa ngamaza. - Amaza
Akukho nto ihlala ngonaphakade kwaye sobabini siyazi ukuba iintliziyo zingatshintsha. Kwaye kunzima ukubamba ikhandlela kwimvula ebandayo kaNovemba. - Izibhamu neerowuzzi
Rocker Amabinzana eeVidiyo